Dad Is Hortaagay In Xabaalaha Lagu Aaso Dhakhtarad U Dhimatay Covid |
Dad Is Hortaagay In Xabaalaha Lagu Aaso Dhakhtarad U Dhimatay Covid
Ra’iisul Wasaaraha Masar ayaa waxa uu cambaareeyay koox dad ah oo ku nool tuul dalkaas ku taal kuwaas oo hor istaagay aaska dhakhtarad lagu soo warramayo inay cudurka coronavirus u dhimatay, dadka falkaas ku dhaqaaqay ayaa waxa uu ku tilmaamay “xushmad-laawayaal”.
Ra’iisul Wasaaraha “oo ku hadlaya afka dadka Masar” ayaa khadka taleefanka waxa uu ku raaligeliyay Mustafa Madbouly oo ah ninkii qabay haweeneydka geeriyootay, bayaan laga sii daayay warbaahinta qaranka ayaa sidaasi lagu sheegay.
Saddex iyo labaatan qof ayaa loo soo xiray arrintaasi ka dhacday deegaanka Shubra el-Bahou ee Nile Delta.
Waxaa la rumaysan yahay inay ka cabsanayeen haddii maydka halkaas lagu aaso ay suuragal tahay in fayraska uu deegaanka ku faafo.
Dhakhtaraddaas oo 64-jir aheyd oo lagu magacaabi jiray, Sonia Abdelazim, ayaa waxa ay geeriyootay maalintii Jimcaha. Wararkuna waxa ay sheegayaan in laga helay xanuunka Covid-19, walow walaalkeed uu arrintaasi diiday, uuna sheegay in walaashii ay u dhimatay oofwareen.
Markii la damcay in la aaso ayaa dadka deegaanku waxa ay hor istaageen gaarigii ambalaaska ahaa ee maydka lagu waday inuu gudaha u galo xabaasha.
Booliska ayaa markiiba lawacay waxa ayna sunta dadka kaga ilmaysiisa ku kala eryeen dadkii dibadbaxayay ka hor inta uusan aasku dhicin, warar ayaa sheegaya.
Dadka la xiray ayaa waxaa la hayn doonaa muddo 15 cisho ah waa mudada uu baaritaanka soconayee.
Hargeisa Degmo Kamid ah Oo Banaan Bax Balaadhan Ku Muujisay…
Madaxwayne Biixi Oo Bookhday Suldaan Xasan Suldaan C/laahi Oo Xanuun…
Gabiley Banan Bax Balaadhan oo Lagu Taageerayo Doodii ay…